आखिर किन आफ्नो पतिको नामले बोलाउने गरिँदैन त ? यस्तो छ धर्मशास्त्रको तथ्य ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > आखिर किन आफ्नो पतिको नामले बोलाउने गरिँदैन त ? यस्तो छ धर्मशास्त्रको तथ्य !
जीवनमा सुख ,शान्तिका लागि धार्मिक आस्था राख्नु आवश्यक मानिने गरिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले जन्म देखि मृत्यु सम्म आफ्नो परम्परा र रितिरिवाज अनुरुप जीवनको यात्रा अगाडी बढाउनु पर्ने हुन्छ । हिन्दु धर्म अनुसार केही नियमहरु पालना गरेमा दुख नष्ट हुने र जीवनमा सुख प्राप्ति हुने बताइएको छ ।
हिन्दु धर्ममा विवाहलाई पनि ठुलो धार्मिक महत्व दिने गरिन्छ । जसमा पुरुष र महिलाले जीवनभर एकअर्कालाई साथ दिने कशम खाँदै अग्नि सामू घुम्ने सहित अरु थुप्रै बिधि सम्पन्न गरि वैवहारिक सम्बन्ध कायम गर्ने परम्परा रहेको छ । धर्मको अर्को नियम के छ भन्दा कुनै पनि जोडी वैबाहिक सम्बन्धमा बाधिएपछि पत्नीले आफ्नो पतिलाई नाम लिएर बोलाउन पाईने छैन ।
वैवाहिक धर्मले के भन्छ?
धेरै मान्छेहरुलाई केही कुराको रहस्य बुज्नको लागि समय लग्न सक्छ । हिन्दू धर्मको अनुसार, घरका महिलालाई लक्ष्मी मानिन्छ, र पत्नीले पनि आफ्नो पतिलाई भगवानको रूपमा सम्मान गर्छन्। यी सबै कुराले गर्दा वैवाहिक जीवनले सफलता पाउँछ।
आज हामी तपाईंलाई यो कुरा बताऊछौँ कि हिन्दु धर्म अनुसार, महिलाले आफ्नो पतिलाई नामले बोलाउँदैनन्। धेरै समय पहिला महर्षि वेदव्यासले यस्तो कुरा बताएका छन् कि पत्नीले आफ्नो पतिको नाम लिएर बोलाउदा पतिको आयु घट्दै जाने गर्छ । जति धेरै पटक आफ्नो पतिलाई नामले बोलायो त्यहि क्रममा उसको आयु घट्दै जाने कुरा धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले हिन्दु धर्ममा महिलाहरुले आफ्नो पतिको नाम उच्चारण गर्न डराउने गर्छन ।
कारोना बाट बाँकेमा थप ११ सङ्क्रमितको निधन